Ungasanganisa Sei Yako Yemukati Kushambadzira | Martech Zone
Mugovera, October 31, 2015 Douglas Karr
Ndakafarira iyi infographic kubva kuJBH uye iyo nyaya nemifananidzo inogadzira sezvaunofunga nezve zvemukati. 77% yevatengesi ikozvino vanoshandisa kushambadzira zvemukati uye 69% yemakemikari inogadzira zvimwe zvirimo kupfuura zvavakaita gore rapfuura. Uye sekungofanana nemunhu wese aine kuravira kweanofarira cocktail, zvakakosha kuti urangarira kuti vateereri vako vakasiyana - nevazhinji vachinakidzwa nedzimwe mhando dzezviri pamusoro pevamwe.
Kuti ikubatsire kunatsiridza zvemukati zvekushambadzira kuedza JBH yakachengeta Iyo Mixology yeChinyorwa Kushambadzira infographic - kushandira kumusoro zano rekuti ungagadzira sei uye ununure zvakagadziriswa zvemukati nemamwe ane hutano zvirevo kubva Hubspot uye SmartInsights yakakandwa mukati meyero yakanaka!
Ini pachangu, ini ndaizowedzera coaster kuchinwiwa chose nechakanaka kudana kuzviito. Zvemukati zvinoita zvirinani kune rako bhizinesi kana iwe ukapa nzira yekubatana uye kutendeuka pamwe nechinwiwa!
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = ""] Kuziva chidimbu chimwe nechimwe chemukati sekubatanidzwa kwezvikamu zvacho kwaive kufunga kukuru uye zano shure kwedu eBook ratakaburitsa neMeltwater, Maitiro eMepu Zvemukati Zvako Kusingafungidzirwe Kwevatengi Nzendo. [/ bhokisi]
Ingo chengeta mupfungwa kuti anenge munhu wese anokoshesa chinwiwa chavo zvishoma zvakasiyana neinotevera. Ndiri fan hombe yebourbon yakanaka uye Coke, asi ini ndiri zvishoma wehuremu, saka pane zvakajairika yakawanda yakawanda Coke kupfuura vazhinji bourbon aficionados vanokoshesa. Kudzokorora chinwiwa chimwe chete nekudzokorora kunongoshanda chete kana chiri icho chete mushanyi wauri kugadzirisa ruzivo rwekudzokorora.
Semazuva ese, ini ndinokurudzira kuita imwe kuyedza kuti uwane chinwiwa chakakwana. Zvimwe zvakati wandei imwe nguva, yakazadzikiswa kesi yekushandisa inotevera, kushomeka kushambadzira… zvese zvinogona kunge zviri zvakasiyana zvaunoda kukwezva kunyange vanhu vazhinji kuti vabate neako brand.
Tags: vanyoraContent Marketingmhando dzemukaticontnet kushambadzira infographicindasitiri nhauinfographicjbhrefu fomu utapi venhauYakareba-FomuKushambadzira Infographicskusanganisayemagariro vhidhiyomushandisi akagadzira zvemukatihutachionamapepa machenavarungu